Voasambotra anaty tavoahangy misy divay i Israel: Pair miaraka amin'ny lafiny politika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Voasambotra anaty tavoahangy misy divay i Israel: Pair miaraka amin'ny lafiny politika
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Isiraely dia firenena kely (any atsinanan'ny Mediteraneana), misy antitra kolontsaina divay (Chalcolithic Era, 4000 TK) izay nahomby tamin'ny taon-jato faha-21 nitaky divay an'ny mpanjifa, mpanjifa ary koa mpitantana sakafo sy zava-pisotro.
Izay taloha dia vaovao indray
Manamboatra divay Isiraely Tsy fahaizana vaovao. Nanoratra i Ellen Walsh (Vitikulture ao amin'ny Isiraely Taloha) fa: "Tsotra dia tsotra no nanatanterahana ny tantaran'ny israeliana satria samy niroborobo tamin'ny tontolo iainana ary nanolotra tombony ara-tsosialy sy ara-toekarena mendrika ho an'ny fiarahamonina." Ny magazine Wine Spectator dia nidera an'i Israel tamin'ny fahaizany “mampifangaro ny teknikan'ny fanamboarana divay taloha amin'ny fahatsapana sy tsiro maoderina.” Lior Lacser, mpamokatra divay ao amin'ny Carmel Winery dia nanapa-kevitra fa, "Israel dia toerana tsara hanaovana divay."
Tao anatin'izay folo taona lasa izay dia nivelatra ny fivarotana divay avy amin'ny magazay lehibe, miaraka amin'ny voafantina voafantina, hatramin'ny fivarotana divay manokana izay mitondra ny zava-drehetra manomboka amin'ny divay ka hatramin'ny kojakoja sy vata fampangatsiahana divay. Malaza ny fampianarana divay sy ny fanandrana divay.
Divay sy Politika israeliana
Ny mpamokatra divay israeliana dia miatrika fanamby marobe, ao anatin'izany, amin'ny tranga sasany, tsy maintsy manofa teti-dratsy avy amin'ny fanjakana. ny Kibbutz, mampitombo mpiasa mandritra ny fijinjana. Vakio ny lahatsoratra feno ao amin'ny divay.travel.